एल्कसनको ‘चुछेउ’- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
विश्वकपका लागि केही दिनमै छनोट सुरु हुनेछ । सेप्टेम्बर १० मा चीनको पहिलो खेल माल्दिभ्सविरुद्ध छ र त्यसैका लागि घोषित टिममा परेका छन्, ब्राजिलमा जन्मेका एल्कसन । चिनियाँ मूलका नभएर पनि चीनको राष्ट्रिय टिममा पर्ने उनी पहिलो खेलाडी हुन् ।
भाद्र १४, २०७६ हिमेश
‘चुछेउ’ भनेपछि अधिकांस चिनियाँको कान ठाडो भइहाल्छ  । त्यसो भनेको चिनियाँ भाषामा ‘फुटबल’ हो  ।
‘चुछेउ’ भनेपछि अधिकांस चिनियाँको कान ठाडो भइहाल्छ । त्यसो भनेको चिनियाँ भाषामा ‘फुटबल’ हो । चीनको दक्षिण पश्चिमी प्राप्त सिचुवानमा साता दिन बिताउँदा जति पनि चिनियाँ भेटें, धेरैसँग मौका मिल्यो कि फुटबलबारे कुरा गर्न खोजें । त्यही ‘चुछेउ’ शब्द प्रयोग गरेर कुराकानी अगाडि बढायो भने त्यसप्रति उत्सुकता देखाइहाल्छन् । तर सबैको निचोड भने एउटै छ, ‘चीनमा साँच्चै नै फुटबल लोकप्रिय त छ, तर सफलता पाएको भने केही छैन ।’
हुन पनि चीनमा फुटबल खुबै लोकप्रिय छ, फुटबलका नम्बर १ प्रशंसक अरू कोही होइन, राष्ट्रपति सी जिनपिङ नै हुन् । उनकै सोच हो भनिन्छ, चीनले सबथोकमा विकास गर्छ भने फुटबलमा पनि उत्तिकै प्रगति गर्नुपर्छ । उनी आएयता चिनियाँ फुटबलको क्रान्ति नै आएको छ भन्दा हुन्छ । उनकै निर्देशनमा युरोपेली क्लब फुटबलमा चिनियाँ लगानी पनि बढेको छ । अचेल ठूलाठूला युरोपेली क्लबका मालिक पनि चिनियाँ हुन थालेका छन् ।
यी त भए, सबै पुरानै कुरा, केही समयदेखि सुन्नमा आएका । अब यही चिनियाँ फुटबल क्रान्ति अहिले दोस्रो चरणमा पुगेको छ । छेन्दु र यिपिन बसाइमा जति पनि अंग्रेजी पत्रिका देख्न पाइयो, ती सबैमा फुटबलका बाक्लाबाक्ला चर्चा थिए र यसको सार हामीजस्ता बाहिरका लागि अनौठो नै छ । नभन्दै काठमाडौं फर्केयता अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले एउटा समाचार ‘ब्रेक’ गरेको सुन्न पाइयो, चिनियाँ राष्ट्रिय टिममा ब्राजिली खेलाडी । हो र ?
के यस्तो पनि हुन सक्छ र ? अबको विश्वकपका लागि केही दिनमै छनोट सुरु हुनेछ । सेप्टेम्बर १० मा चीनको पहिलो खेल माल्दिभ्सविरुद्ध छ र त्यसैका लागि घोषित टिममा परेका छन्, ब्राजिलमा जन्मेका एल्कसन । चिनियाँ मूलका नभएर पनि चीनको राष्ट्रिय टिममा पर्ने उनी पहिलो खेलाडी हुन् । अब प्रश्न हुन सक्छ, यो एल्कसन भन्ने खेलाडी को हुन् त ? उनी एकपल्ट ब्राजिली राष्ट्रिय टिममा पनि परे, तर खेल्न भने पाएनन् ।
चीनमा भने उनी निकै ठूला नाम हुन्, लगभग सबैले सुनेको र चिनेको । उनको चिनियाँ पासपोर्ट पनि तयार छ र त्यसमा चिनियाँ नाम रहेको छ, ‘आई केसन’ । त्यसको अर्थ उनले ब्राजिली नागरिकता पनि छाडिसकेका छन् । चिनियाँ फुटबलमा सबैभन्दा लोकप्रिय र सफल क्लबमा पर्छ, ग्वान्जाउ एभरग्रान्ड । त्यसकै प्रमुख खेलाडी हुन्, उनी । सन् २०१३ मा उनी पहिलोपल्ट चीन आएका थिए र त्यसयता उनी लगातार चीनमै खेलिरहेका छन् ।
उनले चीनको सुपर लिगमा सयभन्दा बढी गोल गरिसकेका छन् । उनकै निर्णायक भूमिका कारण एभरग्रान्डले एसियाली च्याम्पियन्स लिग पनि जितिसकेको छ । फेरि एल्कसनको चीनबाट खेल्ने निर्णय व्यक्तिगत रूपमा ठीक पनि देखिन्छ, किनभने सबैको सपना विश्वकप खेल्ने हुन्छ, तर उनले यो सपना आखिरमा ब्राजिलबाट त पूरा गर्न सक्दैनन् । चिनियाँ राष्ट्रिय टिममा प्रशिक्षक हुन्, मार्सेलो लिप्पी । उनले नै ३० वर्षीय एल्कसनलाई टिममा भित्र्याएका हुन् ।
टिममा परेयता उनले त्यहाँको सामाजिक सञ्जाल सिना वाइपोमा भावुक मेसेज छोडका छन्, ‘म चिनियाँ हुँ । म पूरा विश्वलाई भन्न चाहन्छु, मैले जीवनमा नयाँ यात्रा सुरु गरेको छु, चिनियाँका रूपमा । चीनले मलाई धेरै माया र विश्वास दिएको छ । म त्यसको ऋण तिर्न चाहन्छु ।’ एल्कसनलाई के पनि विश्वास छ भने यो काममा चिनियाँको पूरा समर्थन प्राप्त हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) को नियमअनुसार उनी चीनका लागि खेल्नयोग्य छन् ।
नियमको कुनै छेकबार हुने छैन् । यति समयावधि कुनै देशमा लगातार खेल्दा खेलाडीले त्यही देशबाट खेल्न पाउने हुन्छ । अचेल फिफाको यही नियममा टिकेर अरू धेरै देशले पनि विदेशी खेलाडीलाई खेलाएका छन् । एसियाली च्याम्पियन कतारको लगभग पूरा टिम नै विदेशी खेलाडीले भरिएको छ । फेरि यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण त, डिएगो कोस्टा नै हुन् । उनी पनि ब्राजिली हुन् । ब्राजिलकै लागि पनि खेले । तर पछि स्पेन रोजे ।
आजभोलि विश्व फुटबलमा यो सामान्यजस्तै हो । चीनको प्रसंगमा कुरा यहीं सकिन्न । चीनमा अहिले त्यस्ता नौ अरू विदेशी खेलाडी छन्, जसले आफ्नो देशको नागरिकता छाडेर चिनियाँ हुन तयार छन् । एल्कसन चीनका लागि खेल्ने पहिलो विदेशी पनि होइनन् । यसअघि नै निको योनारिसले चीनका लागि खेलिसके । उनी लन्डनमा जन्मेका हुन् । उनीसँग भने दोहोरो नागरिकता छ । उनले दुई खेलमा चीनको प्रतिनिधित्व गरिसके ।
अब हुन सक्छ, कुनै दिन यस्तो पनि आउने छ, जति बेला पूरा चिनियाँ टिम त्यस्ता खेलाडीले भरिएको हुनेछ, जसको जन्म चीनमा भएको थिएन, अझ भनौं चिनियाँ मूलका हुने छैनन् । चिनियाँ फुटबल संघका नयाँ अध्यक्ष हुन्, चेन सुयान । उनले सीधा भन्ने गरेका छन्, ‘हामी सन् २०२२ को विश्वकपका लागि कतार जान चाहन्छौं । विदेशी मूलका खेलाडीले हामीलाई यो उद्देश्य प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ । तर यो हाम्रो छोटो समयको योजना मात्र हो ।’
उनकै शब्दमा केही विदेशी खेलाडी चिनियाँ हुने क्रममा छन्, त्यसलाई लिएर सबै खाले प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । त्यसको अर्थ कम्तीमा विश्वकपको छनोटकै क्रममा केही विदेशीले पनि चीनको टिमबाट खेलेको हेर्न पाइनेछ । अहिले चीनमा बढीभन्दा बढी ब्राजिली खेलाडी छन् । सुयानले सिन्ह्वा समाचार संस्थालाई के पनि भनेका छन् भने केही वर्षपछि यसरी विदेशी खेलाडीलाई खेलाउने नीतिमा कडाइ गरिनेछ, अथवा भनौं, विदेशी खेलाडीको संख्यालाई कम गरिनेछ ।
फुटबल संघको यो नीतिलाई लिएर चीनमा दुई प्रकारका मत पाइएका छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो । एकथरी मान्छन्, विदेशी खेलाडीलाई खेलाएर चिनियाँ फुटबल माथि जान्छ भने यसमा के पो समस्या ? आखिरमा यो चीनमा विदेशी लगानी भित्रिएजस्तै त हो । अर्कोथरी भने यसमा सहमत छैनन्, यसले उल्टै चिनियाँ फुटबल कमजोर हुने मान्छन् । कतारले यही नीति लिएर एसिया कप जित्यो, कतारको जनसंख्या निकै कम छ । यस्तोमा कतारले धेरै खेलाडी उत्पादन गर्न नसक्ने बाध्यतालाई बहाना बनायो । तर यही बहाना चीनमा भने लागू हुँदैन । एक अरब जनसंख्याबाट एउटा राम्रो फुटबल टिम किन बनाउन सकिन्न भन्ने प्रश्न ठीक पनि देखिन्छ । पछिल्लो समय उमेर समूहको फुटबलमा पनि चीनको प्रदर्शन कमजोर रहेको छ । एसियाली यू–१६ र यू–१९ मै चीनको टिमले समूह चरण पार गर्न सकेन् । चीनले राम्रा युवा खेलाडी उत्पादन नै गर्न सकिरहेको छैन् ।
यसबीच पनि चीनबाट अनौठा अनौठा फुटबलसँग जोडिएका समाचार आउन छाडेका छैनन् । जस्तो, १० हजारको संख्यामा तुरुन्तै अब्बल दर्जाको फुटबल मैदान बनाउने । लिभरपुल र रियल म्याड्रिडजस्ता क्लब सम्हालेका प्रशिक्षक राफेल बेनिटेज चीन पुग्ने । अनि गेराथ बेलले चीनमा क्लब फुटबल खेले, साताकै १० लाख डलर पारिश्रमिक दिने आदि आदि । यस्तै समाचार त हो, एल्कसनले चीनबाट खेल्ने पनि । खासमा यो चिनियाँ फुटबल क्रान्तिको २.० स्वरूप हो । प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ १२:१४
भाद्र १४, २०७६ कृष्ण खनाल
नेपालको क्रान्ति इतिहासमा गणेशमान सिंहको नामअगाडि कुनै परिचयजन्य विशेषण आवश्यक छैन  । नामै पर्याप्त छ उनलाई चिन्न  ।
नेपालको क्रान्ति इतिहासमा गणेशमान सिंहको नामअगाडि कुनै परिचयजन्य विशेषण आवश्यक छैन । नामै पर्याप्त छ उनलाई चिन्न । विद्यमान अवस्थाप्रति असन्तुष्टि र असहमति भनेको नयाँ सिर्जनाको बीउ हो । कालान्तरमा यो विशाल वृक्ष बनेका अनेकौं दृष्टान्तले भरिएको छ मान्छेको जीवन र समाजको गति । त्यसकै परिणामस्वरूप मानिसका चिन्तन बदलिएका छन्, समाज बदलिएको छ, राजनीति बदलिएको छ । रूढ परम्परालाई भत्काउने मात्र होइन, स्थापित सोच र पद्धति नै बदल्ने परिवर्तन हो क्रान्ति । त्यसैले २००७ साललाई हामी क्रान्ति भन्ने गर्छौं । नेपालको सामाजिक र राजनीतिक चिन्तन एवं प्रयोगमा जे जति नयाँ कुरा आएका छन् २००७ सालको क्रान्तिले नै त्यो ढोका खोलेको हो । त्यसैले २००७ सालको क्रान्ति ‘माउ क्रान्ति’ हो ।
गणेशमान सिंह नेपाली क्रान्तिका शिखर पुरुष हुन् । राणा शासनविरुद्ध उनको नाम क्रान्तिको मसाल नै थियो । गणेशमानको नाम झिकिदिने हो भने त्यो क्रान्तिको स्वरूप पूरा देख्न सकिन्न । २०४६ सालको आन्दोलन त उनकै सोच र निर्णयको उपज हो । उनले नगर्दैमा इतिहासको गति त रोकिँदैनथ्यो तर त्यसको रूप कस्तो हुन्थ्यो भन्न सकिन्न । एउटा मानिसले आफ्नो जीवनमा तीन–तीनवटा राजनीतिक आन्दोलन हाँकेको उदाहरण सामान्यतया पाइन्न । गणेशमानको जीवनको भने यो यथार्थ हो ।
यिनै कुरालाई समेटेर हरि गौतमको नयाँ कृति आएको छ ‘नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह’ । ओरियन्टल पब्लिकेसन, काठमाडौंले यसै वर्ष प्रकाशन गरेको यो कृति बजारमा नपुग्दै मैले पढ्ने अवसर पाएँ । हुन त, लेखनकै क्रममा यसको पहिलो खेस्रा पनि पढेको थिएँ । प्रकाशन भएर आउँदा निकै परिमार्जन र परिवर्तन भएछ । पानामात्रै बढेको होइन, विषय र गुणवत्ता नै थपिएछन् । पुस्तकको प्रारम्भमा ‘तमसो मा ज्योतिर्गमय’ लेखिएको आकर्षक आकृति विम्ब र अन्त्यमा ‘यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत... धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवानी युगे युगे’ गीता श्लोक उद्धरणले क्रान्तिप्रति लेखकीय आस्थालाई उजागर गरेको छ ।
विगत केही वर्षदेखि म हरि गौतमलाई चिन्दछु । उनको अध्ययन र साधनालाई नजिकैबाट हेर्न पाएको छु । साहित्यको विद्यार्थी भएर पनि समाज, इतिहास र राजनीतिको अध्ययनमा उनको चाख मिहिन रूपले बसेको छ । यो पुस्तक स्वयं त्यसको साक्षी हो ।
गणेशमान सिंहका बारेमा अध्ययन नै भएको छैन भने हुन्छ । माथवरसिंहले तयार गर्नुभएको ‘मेरो कथाका पानाहरू’ एउटा महत्त्वपूर्ण कृति हो । त्यो त स्रोत भण्डार नै हो जसमा गणेशमानका स्मरणहरू लिपिबद्ध भएका छन् । स्मारिका शैलीका केही स्मरण एवं सकलनहरूबाहेक अरू केही लेखिएको छैन भन्ने दृष्टान्त यही पुस्तकको सन्दर्भसूचि हेरे पनि प्रस्ट हुन्छ । यस अर्थमा हरि गौतमको यो पुस्तक अध्ययन र अनुसन्धानका हिसाबले पहिलो कृति हो भन्न सकिन्छ ।
लगभग सात सय पृष्ठको यो पुस्तकमा गणेशमान सिंहबारे अद्योपान्त अध्ययन र विवेचना गरिएको छ । सिंहको बहुआयामिक व्यक्तित्वको उजागर भएको छ । परिवारिक राजनीतिक, सामाजिक पृष्ठभूमि मात्र होइन नेपालको समकालीन इतिहासकै विशद चर्चा । केन्द्रीय पात्र गणेशमान भए पनि सँगसँगै टंकप्रसाद आचार्य, चार सहिद (शुक्रराज, धर्मभक्त, दशरथ चन्द, गंगालाल) बीपी कोइराला, पुष्पलाललगायत क्रान्तिमा होमिएका अरू प्रमुख पात्रहरूको पनि सन्दर्भअनुसार पर्याप्त चर्चा गरिएको छ । प्रजापरिषद्, बीपी कोइराला र कांग्रेसको कुरा गणेशमानको राजनीतिका अंग नै भए । व्यक्ति र व्यक्तित्वकेन्द्रित भए पनि यो पुस्तकले धेरै फराकिलो परिवेश समेटेको छ । आधुनिक चिन्तनसहित राजनीतिक जागरणको विवेचना गरिएको छ । साथै परिशिष्टमा गणेशमानका बारेमा बीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारीलगायतले गरेका केही सान्दर्भिक टिप्पणी र केही ऐतिहासिक दस्तावेजले पुस्तकको सान्दर्भिकता र महत्त्व बढाएको छ । इतिहासको त्यो कालखण्डका कुनै कुरा छुटेजस्तो लाग्दैन ।
पुस्तकका कमीकमजोरी नभएका हेइनन् । लामा उद्धरणले पुस्तकको मौलिकतालाई न्यूनीकरण गरेको छ । चुस्त सम्पादनको कमी र सबै कुरा राख्ने मोहले अनावश्यक पृष्ठ बढाएको छ । तथापि सबै किसिमका पाठकका लागि यो एउटा संग्रहणीय सन्दर्भ ग्रन्थ सावित हुनेछ ।
नेपालमा राजनीतिक नेता र नेतृत्वका बारेमा खासै अध्ययन, अनुसन्धान भएको छैन । प्रदीप गिरिले भनेजस्तै हामी उनीहरूका या प्रसंशक छौं वा विरोधी मात्र । यस्तै केही प्रशंसाले भरिएका जीवनी र घटनाकेन्द्रित विवरण मात्र लेखिएको पाइन्छ । स्मारिकाहरू प्रकाशित गरेर उनका प्रशंसा र गुणगाथा भर्ने चलन बसेको छ । सतहमा बग्ने राजनीतिलाई मात्र हेरेर त्यसका नायकको भेउ पाउन्न सकिन्न । राजनीतिक जीवनी (बायोग्राफी, अटोबायोग्राफी) लेख्ने संस्कृति नै बसेको छैन । नेताहरूले पनि आफ्नाबारेमा आत्मवृत्तान्त, स्मरणहरू अत्यन्त थोरै लेखेका छन् । यसमा बीपी कोइराला सबैभन्दा अग्रणी छन् । आफ्नो कथा, जेल जर्नल, अदालतमा दिएको बयान, आत्मवृत्तान्त मलाई निकै उम्दा राजनीतिक लेखन लाग्छन् । उनको पनि अध्ययन, अनुसन्धान हुन सकेको छैन । मूल्यांकन इतिहासले गर्छ, पछिल्लो पिंढीले गर्छ । लेखकको काम खोजी गर्नु हो, त्यसको व्याख्या विवेचना गर्नु हो ।
गणेशमान सिंह यो कालखण्डको अद्वितीय नेता हुन् । उनको राजनीति र जीवनलाई हेर्दा महात्मा गान्धी र नेल्सन मण्डेलाको सम्झना आउँछ । एउटा संयोग हो, जुन बेला गणेशमान सिंह निर्दलीय पञ्चायतका विरुद्ध निर्णायक आन्दोलन फुक्दै थिए, नेल्सन मण्डेला पनि दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेदी शासन (अपर्थाइड रिजिम) विरुद्धको आन्दोलनलाई सफलताको निर्णायक मोडमा पुर्‍याउँदै थिए । १ फागुन २०४६ का दिन मण्डेला जेलबाट छुटे, ७ फागुनमा हाम्रो आन्दोलन सुरु भयो । आन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा हामी मण्डेलाको सफलता चर्चा गर्थ्यौ, विश्वमा लोकतन्त्रको बढ्दो लहरले रोमाञ्चित हुन्थ्यौं । स्मरणीय छ, गणेशमान सिंह र नेल्सन मण्डेला समकालीन हुन् । मण्डेलाभन्दा गणेशमान तीन वर्ष जेठा । संघर्ष र निष्ठाको इतिहास उस्तै छ । त्यसैले होला ‘मेरा कथाको पानाहरू’ पढ्दा मण्डेलाको ‘लंगवाक टु फ्रिडम’ को स्वाद पाइन्छ ।
लेखक गौतमले गणेशमान सहिद गंगालाल, गान्धी र गीताबाट प्रभावित थिए भनी उल्लेख गरेका छन् । गंगालालसँगको दोस्ती र प्रभावका बारेमा गणेशमान स्वयंले धेरै पटक उल्लेख गरेका छन् । गान्धीसँग प्रभावित नहुने कुरै भएन । गणेशमानको मात्र के कुरा त्यस बेला राणाशासनविरुद्ध आन्दोलन उठाउने टंकप्रसाद आचार्य, बीपी कोइरालालगायत सबैका लागि गान्धी एउटा उदाहरण थिए । त्यसो भन्दैमा उनीहरूको राजनीतिक लाइन पनि गान्धीकै बाटोमा थियो भन्न मिल्दैन । स्वतन्त्रता वा लोकतन्त्रको आन्दोलन र राजनीतिक लाइनमा निकटता पाउन निकै कठिन छ । यहाँ मेल खाने कुरा के हो भने गणेशमानको कमान्डमा भएको २०४६ सालको आन्दोलन गान्धीकै विचारअनुकूल अहिंसात्मक थियो । आन्दोलनकारी निहत्था थिए, सडकमा नारा–जुलुस गर्थे, सरकार गोली चलाउँथ्यो ।
अध्यात्म दर्शनले भन्छ— मान्छेको मन इन्द्रियजन्य विषय भोगमा रमाउँछ । बुद्धि विवेकले विषय भोगमाथि नियन्त्रण गर्न सके ऊ सत्कर्ममा लाग्छ । गणेशमानलाई विषय भोगको कुनै कमी थिएन । परिवारको वातावरण पनि त्यतैतर्फ प्रोत्साहित गर्ने खालको थियो । तर अपवाद बने गणेशमान, बुद्धि र विवेकले सत्कर्ममा प्रवृत्त गरायो । आत्मसम्मानको जिद्दीले उनमा मेट्रिक पास गर्ने जाँगर चल्यो । आफ्नो वरिपरिको समाजमा राणा शासनको अचाक्ली अन्याय, अत्याचार र दुर्व्यवहार देखेपछि त्यसको अचुक औषधि क्रान्ति अर्थात् राजनीति हो भन्ने चेतना केटौले उमेर (टिन एज) मै दह्रो भएर आयो । बाटो आफैं खोज्न थाले । धर्मभक्तको सानिध्य र गंगालालको संगतमा प्रजापरिषद्को राणाविरोधी आन्दोलनमा होमिए । केटाकेटी बेलामा चित्रित उनको उपद्रवी र हुल्याहा व्यवहार राजनीतिक निष्ठा, अठोट र विनयशीलतामा बदलियो । एउटा महान् क्रान्तिकारीको उदय भयो । ‘सहिदको रगत नभुल्ने’ चेतना जागरित भयो । सायद यही रूपान्तरणलाई लेखकले गीताको प्रभाव भनेर उल्लेख गर्न खोजेका होलान् ।
गणेशमानकै निष्ठा र अठोटले २०४६ सालको आन्दोलन सम्भव भयो । संगठन बनेदेखि दुई विपरीत राजनीतिक ध्रुवमा बाँडिएका कांग्रेस र कम्युनिस्टको पञ्चायतविरुद्ध बहुदलीय प्रजातन्त्रका पक्षमा मोर्चाबन्दी उनकै कारणले सम्भव भयो । बीपी रहिरहेको भए के त्यो सम्भव हुन्थ्यो र भनेर शंका गर्नेहरू अझै छन् । यसमा बीपीको नाम जोडिरहनुको कुनै अर्थ छैन । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति दुवै बदलिएको थियो । विश्वराजनीतिको विभाजनकारी शीतयुद्ध सकिएको थियो । देशभित्र मालेलगायतका उग्र कम्युनिस्ट घटकहरूले पनि बहुदलीय राजनीतिको अपरिहार्यतालाई स्वीकार गर्न थालेका थिए । गणेशमानले पनि कुनै रहर वा जमात ठूलो देखाउनकै लागि कम्युनिस्टसँग एकता गरेका थिएनन् । उनमा विकसित राजनीतिको पर्याप्त चेतना थियो । ‘बहुदलीय प्रजातन्त्र’ को स्वीकार्यता एकताको पहिलो सर्त थियो । लोकतन्त्रको मूल्य र सिद्धान्तविपरीत वा आँच पुर्‍याउने सम्झौता थिएन । बरु त्यसकै पुनःस्थापना र संवर्द्धन लक्षित थियो ।
क्रान्ति र राजनीतिको यात्रा सदैव संगतिपूर्ण हुँदैन । भारतमा स्वतन्त्रतापछि महात्मा गान्धीले भनेको बाटोमा राजनीति गएन । उनले नै सर्वाधिक रुचाएका जवाहरलाल नेहरूका नीति र दृष्टिकोण भिन्न भए । तर पनि भारतको राजनीतिक यात्रा विसंगतिपूर्ण भने भएन भन्न सकिन्छ । तर नेपाल क्रान्ति र विसंगति आफैं ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ । २००७, २०४६, र २०६२/६३ का क्रान्ति, आन्दोलन जे भनौं ती सामान्य राजनीतिक परिवर्तन थिएनन् । तर त्यसलाई हामीले न जगेर्ना गर्न सक्यौं, न प्रणालीमा र व्यवहारमा रूपान्तरण नै । क्रान्तिपछि गणेशमानका कुरा कांग्रेसकै सत्तासीनहरूलाई असान्दर्भिक लाग्न थाले । उनका कुरा उपेक्षित भए । यत्रो महान् परिवर्तनका नायक गणेशमान सिंहको कााग्रेसी सत्तामै विषादपूर्ण अवसान भयो । अहिलेका नेताहरूले एकपल्ट गम्भीर भएर सोचून्, यस्तो किन भयो ? अन्यथा, बाटो फेरि भ्रमित र अलमलमै रहनेछ ।
नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह
लेखक : हरि गौतम
प्रकाशक : ओरियन्टल
मूल्य : रू. ९७५/–
प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ १२:१३
रामायणको लंका : श्रीलंका कि भारतमा ?
अक्षर साधनाको गोधूलि जीवन